Inona no ho hita ao Almería | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Almeria, Inona no ho hita
Hitantsika amin'ity tranga ity ireo toerana izay tsy maintsy hitantsika ao amin'ny Faritanin'i Almería, eo anelanelan'ny Granada sy Murcia. Sehatra lehibe misy tontolo iainana an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny tantara maro, fa izay ahitantsika toerana voajanahary maro hamoizantsika tena.
Toerana nahaterahan'ny Tandrefana, izay nankafizin'ny olona nandritra ny am-polony taona maro, sy ny toerana nitifirana ny sary avy amin'ny sarimihetsika toa an'i Lawrence of Arabia na Indiana Jones. Tsy isika irery no mahita ao Almería toerana voajanahary misy lanjany lehibe, izay manana maro toerana mahaliana hitsidihana.
1 Valan-javaboary Cabo de Gata
2 Ny Alcazaba sy ny rindrina
3 Ny katedraly ny fahatongavana ho nofo
5 Tranombakoky ny solika
6 Museum an'ny Guitar
7 Tany efitra Tabernas
11 Lohasahan'i Almanzora
12 Castle an'i Macenas any Mojácar
13 Castle of San Felipe any Níjar
Valan-javaboary Cabo de Gata
Iza no mbola tsy naheno ny morontsiraka mahafinaritra sy voaaro an'ny Valan-javaboary Cabo de Gata. Toerana mahafinaritra feno faritra voajanahary voatahiry ary zaridaina volkano geo any amin'ny Mediterane izy io. Misy torapasika tsy hita isa ao aminy hankafy ny rano Mediteraneana, toa ny morontsiraka Monsul, Playa de los Muertos na Playa de los Genovees. Misy ihany koa ny tanàna mahafinaritra sasany izay manjono manjono, toa an'i San José na Las Negras. Mazava ho azy fa tsy maintsy tadidintsika fa sehatra voajanahary misy lanja lehibe io ary tsy maintsy karakaraina, indrindra fa ankehitriny satria mpizahatany io.
Ny Alcazaba sy ny rindrina
Ny Alcazaba no tsangambato lehibe ao an-tanànan'i Almería. Goavana izany trano mimanda muslim miaraka amin'ny fahitana tsara ny tanàna. Azonao atao ny mamakivaky ny rindriny tsy mampino ary mankafy ny tranobe Homage sy Pólvora. Ianao dia hiatrika ny fananganana Silamo lehibe indrindra amin'ity karazana ity any Espana.
Ny katedraly ny fahatongavana ho nofo
Raha mbola manohy ny tanànan'ny Almería ianao dia manana fitsidihana tena ilaina hafa. Katedraly misy ny nofo. Tsy katedraly mahazatra izy io, ary misy haingo ivelany, fa kosa lafiny fiarovana, miaraka amin'ny tilikambo lehibe izay hampahatsiahy antsika ny Alcazaba. Amin'ny maha-tanàna misy varotra betsaka azy, ny fanafihan'ny jiolahin-tsambo dia nahatonga azy ireo hanangana ny katedraly ho toy ny toerana mimanda. Ao anatiny dia efa manana endrika mahazatra kokoa ao amin'ny katedraly.
Ao an-tanàna dia azontsika atao koa ny mankafy fitsidihana ara-kolontsaina, toy ny Museum of Almería. Tena tsara izany Tranombakoka arkeolojika izay hahafantarana ireo dingana samihafa amin'ny tantara. Misy gorodona maromaro misy fampirantiana mampiseho zavatra nangonina tamin'ny fitrandrahana, na tamin'ny andron'ny Romanina na tamin'ny vanim-potoana Arabo Andalosiana. Toerana mety haleha miaraka amin'ny ankizy.
Tranombakoky ny solika
Manohy amin'ny fitsidihana ara-kolontsaina ao an-tanànan'i Almería izahay. Amin'ity tranga ity dia afaka mitsidika ny Museum Museum momba ny solika ao afovoan'ilay tanàna taloha izahay. Momba izany fikosoham-bary, izany hoe, fanodin-menaka nentim-paharazana miorina amin'ny trano taloha. Ho afaka hahafantatra zavatra bebe kokoa momba ny famokarana ity volamena ranoka ampiasaintsika rehetra isan'andro ity isika.
Museum an'ny Guitar
El Museum an'ny Guitar Fanamboarana vao haingana izy io, saingy toerana tena ilaina ho an'ireo mpitia mozika. Any ambadiky ny katedraly no misy azy ary manolotra efitrano maromaro misy fampirantiana sy efitrano hanaovana hetsika isan-karazany. Manantena izahay fa ho afaka hanatrika ny sasany amin'ireo fankalazana ireo.
30 kilometatra miala ny renivohitra no malaza Tany efitra Tabernas, toerana voafidy hitifitra sarimihetsika tandrefana maro, ary azo antoka fa toa hitondra antsika any amin'ireny toerana ireny isika amin'ny vanim-potoana hafa. Amin'izao fotoana izao dia afaka milaza isika fa mbola toerana mahasarika ny hatsaran-tarehiny voajanahary, satria izy io koa dia efa seho tamin'ny andiany Game of Thrones malaza.
Ao amin'ny Tany Efitr'i Tabernas dia mbola misy ny sarin'ny sarimihetsika taloha tandrefana, izay nanjary mpizahatany tena mahaliana. Raha te hoentina any amin'ny iray amin'ireo sarimihetsika andrefana ianao dia azonao atao ny mitsidika ny Fort Bravo, toerana misy lohahevitra misy toerana ahafahanao mandany ny andro miaraka amin'ny fianakavianao, miaraka amin'ny andiana sarimihetsika. Afaka mahita ireo seho ianao ary koa mandeha mitsangantsangana sy mitaingina soavaly amin'ny manodidina.
Na dia ny ankamaroan'ny Sierra Nevada Any amin'ny faritanin'i Granada no misy azy, afaka milaza isika fa misy ampahany ihany koa izay avy any Almería. Izany no mahatonga io faritra tendrombohitra voajanahary io tafiditra ao anatin'ny drafitra tena ilaina ho an'ny faritany. Ny toeram-pialan-tsasatra sy ny lanezy feno lanezy tsara tarehy dia mifanohitra tsara amin'ny tany efitra na ny morontsiraka mafana amin'ny morontsiraka.
Ity tandavan-tendrombohitra ity dia eo akaikin'ny efitra, ka noho izany dia misy tontolo voajanahary tsy mampino ary tanàna kely mahafinaritra. Manolo-kevitra ny hitsidika ireo tanàna misy trano fotsy sy hankafy ireo zavatra kely hita, manomboka amin'ny toerana manan-tantara ka hatrany amin'ny olony.
Ao amin'ny faritra afovoan'i Almería dia misy toerana mahafinaritra ihany koa. Raha ny tianao no mahita toerana mahafinaritra ary mitsidika ireo tanàna izay tsy tototry ny fizahan-tany, afaka mankany amin'ny Lohasahan'i Almanzora ianao, izay mangina ny fomba fiainana ary ny loharano dia avy amin'ny tany sy ny natiora. Tsy maintsy manandrana ny gastronomie eto an-toerana mba hahagaga ny tsirony mahazatra azy.
Castle an'i Macenas any Mojácar
Ity lapa miendrika tilikambo miavaka ity dia eo akaikin'ny Morontsiraka Macenas ao Mojácar. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ny iraka nampanaovina azy dia tsy iza fa ny fiarovana ny faritra amin'ny fanafihan'ny jiolahin-tsambo. Noho izany dia io lafiny matevina io amin'ny trano mimanda tsy azo vonoina.
Castle of San Felipe any Níjar
Ity lapa ity dia miorina amoron-tsiraka, ao amin'ny tanànan'i los Escullos, ao Nijar. Tsangambato fiarovana namboarin'i Carlos III ary ankehitriny dia mbola manana toerana fiarovana tsara.
Ity tanàna ity dia toa iray amin'ireo tsara tarehy indrindra eto Almería, ka mendrika hitsidika azy io. Eo am-pototry ny Sierra Nevada no misy azy ary tsy ampoizina noho ny fananany mikasika arabika sasanyTsy zava-poana ny toeram-ponenan'i Boabdil, mpanjaka farany Moorish of Granada.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Almeria » Inona no ho hita ao Almería
Kianja Mena any Russia, tsy maintsy mahita